Manondraka | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Misy antony maromaro mahatonga ny mpamboly tsy maniry na tsy afaka manamboatra fitaovam-pitaterana efa voaomana ho an'ny zaridaina sy ny lakozia. Amin'ireny tranga ireny, ny fanondrahana rano dia atao amin'ny tanana avy amin'ny fomba itondran'ny mponina tsirairay avy ny fahavaratra. Raha ny marina, ao amin'ny tranokalanao dia afaka mahita zavatra sy ampahany ampy amin'izany ianao.
Kitapo ho an'ny rano avy amin'ny barika: ny fomba hisafidianana sy ny fomba handaminana rano
Ny paompy iray ho an'ny barika ho an'ny fanangonam-drano dia ny fitaovana ilaina amin'ny hydraulika ao amin'ny firenena dacha, izay tsy misy ny famatsian-drano avy amin'ny fantsom-pitaterana rano. Raha ny randran-drano sy ny fandriam-bolo manondrahana azy dia manan-danja ihany koa ho anao, eto ambany ianao dia hianatra ny fomba rehetra hisafidianana ny pumps mba hanondrahana ny zaridaina amin'ny barika.
Ny tsiambaratelon'ny fanondrahana rano amin'ny tavoahangy plastika amin'ny tanany manokana
Ny rafitra fanondrahana rano dia ahafahan'ny fitsinjarana ny zavamaniry eo ambanin'ny fotony. Rehefa mandany fotoana kely ianao, dia afaka manangona rafitra toy izany any an-trano, tsy mila mividy lafo vidy. Rehefa mitandrina tsara, dia manangom-drano amin'ny tavoahangy plastika, vita amin'ny tananao, dia hanompo mandritra ny taona maromaro.
Safidio ny solika hanondrahana ny zaridaina
Ny dacha rehetra izay ahazoan'ny voankazo, legioma ary zavamaniry hafa fanondrahana. Ao amin'ny lahatsorantsika dia hamaritra ny fomba hisafidianana ireo mpiparitaka amin'ny fandroana ao amin'ny zaridaina isika, hamariparitra ny karazan'ireny fitaovana ireny. Ny famaritana ankapobeny sy ny tanjon'ny fitaovana Miankina amin'ny fandefasana ny toerana sy ny zavamaniry tsy maintsy atao, dia zava-dehibe ny fisafidianana ny mpiparitaka.
Manondraka ny zaridaina amin'ny rafitra fanondrahana "Drop"
Mba hahazoana harona be dia be, raha tsy manatanteraka ny habaka mandritra ny 24 ora isan'andro, manondraka ny zavamaniry, rafitra fanondrahana manokana ho an'ny zaridaina. Ny tena malaza amin'izy ireo dia ny fananganana tohodrano. Ao amin'ny lahatsorantsika, amin'ny fampiasana ny ohatra amin'ny "Fipoahana" fananganana, hamaritra ny fanorenana ity ary nahoana no ilaina.
Ny tombontsoa amin'ny fampiasana famerenana ny fitotoana ao amin'ny zaridaina
Maro ny tompony mandany fotoana be dia be amin'ny fandroana ny zavamaniry, ary mandany rano bebe kokoa noho ny zavamaniry ilainy. Ny tena olana dia ny famokarana rano mangatsiaka tsy tapaka avy any an-tokantrano sy saha. Ho an'ireny tanjona ireny, dia nisy timer fanondrahana manokana, izay hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity.
Ny fomba fanaovana ny volotara ho an'ny fantson-drano dia manao izany
Miaraka amin'ny fahatongavan'ireo lohataona mafana, manomboka ny vanim-potoana mamboly sy fandroana ny mpamboly, ary manomana sy manamarina ny fitaovana ilaina rehetra. Ho an'ny mpikaroka sasany, dia ny fahatsiarovana fotsiny ny fahasarotan'ny famoahana ny fantson-drano dia miteraka fisavorovoroana. Ny famahana ity olana ity dia hanampy ny vainafo ho an'ny fantson-drano.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Manondraka